Ndiya kuvuma kwi-streak yolonwabo xa i-Triumph Bonneville SE ibetha i- Triple R Street kunye ne- Thunderbird kwi- Moto Poll kwixesha elizayo lokuhlola ibhayisikili . Nangona abaphikisanayo babeya kwenza amaqabane azonwabisa, kwi-bike ye-2009 e-New Orleans Ndandichukumisekile ukuba indlela eyenziwe ngayo i-Bonneville iminyaka engu-50 ubudala iguquke ngokuthe gqolo ngelixa ilawula ukugcina izibuko zayo ezingapheliyo.
Xa ndikwazisa umnxibelelwano kwi-Triumph ukuba ndiyalela uBonnie, ndacelwa ukuba ndihambe kwi-triumphmotorcycles.com kwaye ndenze ibhayisiki yam usebenzisa ithuluzi le-configurator ye-intanethi. "Hmmm," ndacinga, "Oku kufanele kukuhle."
Kwaye kumnandi, kuba into elandelayo eyona nto ehamba phambili ekukhweleni ngokwenene ikwahlula kwii-garage kwaye iqwalasela ibhayisikili oya kuhlala nayo kunyaka ozayo. I-Bonneville SE iqala kwi-8,599 yeeRandi, kwaye emva kokukhetha umbala wam (ndihamba nePacific Blue / Fusion White phezu kweJet Black), ndongeze i-Arrow 2-into-1 yokukhathala (i-$ 1,099), umzila we-chrome we-chrome ($ 219.99), kunye ne-bar i-mirror kit (i-$ 119.99.) Ngelishwa, akukho zikhwama zesikhumba zengxowankulu zengxowankulu (i-$ 349.99) okanye i-saddlebags (i-$ 249.99) ezisebenzayo. Ndagqiba kwelokuba ixake iibhegi kwaye ndabambelele kwiArrows, kuba i-note engummangaliso yayivakala kakhulu ekuqalisweni.
Ixabiso elipheleleyo lam uBonnie? $ 10,038.97
Emva kokuthumela kwimiyalelo yam, ndadlala umdlalo wokulinda, kwaye ekugqibeleni ndafumana i-imeyili ukuba iBonneville yam ilungile; nangona ixhotyiswe njengoko ndakuyilwe, kwakuyiyona ibhayisikili ye-demo efikeleleke kunye neekhilomitha ezingama-3,470 ngehora. Ngezantsi kwinqanaba lokuhambisa iiflethi e-Placentia, eCalifornia, ndasayina isivumelwano somboleko, sahlwitha imifanekiso emibini, kwaye ndiyifaka ibhayisikili emini.
Iwele engama-865cc ejikelezayo idityanisiwe kodwa idibene kwindawo engaqinisekanga, iphosa ukuba ndiyidonsa i-knob engaqiniyo kwaye ndivumele injini ifudumale okwesikhashana. Ngokukhawuleza emva koko, ndachukumisa i-knob ngaphakathi, ndicofa i-shifter into gear, kwaye ndikhuphe i-clutch lever-yonke into eyabangela imemori yengqondo yeBonnie. Kodwa iinyawo ezingama-20 eziphuma kwisikhululo seenqwelo-moya, ibhasikidi yahlwaywa yafa.
Ndayiphakamisa ibhayisikili kwaye, ngokuqinisekileyo, kwakungekho gesi. "Yim, bafana!" Ndacinga kum, njengoko ingcweti yongezelela isibini esingama-gallons of unleaded kwaye yandithumela endleleni.
Xa sabuyela e-Bonnie kwaye sijolise ngasentla ngasemaphandleni emihlanu, kwakubonakala ngathi i-torque ene-torque ene-torque ene-torque iphakamileyo. Inqaku likaBonnie lokuqhaqhawulayo alizange likhwankqise, okanye likhwaza ngokukrakra - ukuba nantoni na, iArrows yayibonakala ikhupha umlingana ogqithiseleyo ukusuka kwiwele elifanayo. Kwakukho neenkalo ezimbalwa ezingaphelelanga-ezigqibeleleyo zeBonneville, ndikhunjuzwe, phakathi kwabo isihlalo esenza ukuba i-ergonomics yebhayisiki ibonakale i-compact more than I would like. Abagibeli besigxina esifutshane banokuqonda ukuphakama kwesihlalo esingu-29.1 intshi, kodwa ndiziva ukuba ukuseta kungakhokelela ukuba ndikhethe i-saddle ephezulu (kwaye ibe mide), kwaye mhlawumbi ubeke izikhonkwane.
Nangona imodeli ye-T100 ine-bell longest and bend forward forward to the barbar, ndandingumdlali omkhulu wongxowankulu kunye nama-chrome bits; Ndingumntu omncinci we-kinda guy (nangona iivili ze-T100 ezithandiweyo zithandeka kakhulu.) Ndacinga ukuba i- Thruxton bars yayiyongezwa ngokuphosakeleyo kwi-SE yam, kodwa iNtlupheko ayithengisanga ngokwahlukileyo.
Ukuhamba ngeendlela ezihamba ngeendlela ezi-5, uBonneville waziva zonke iindawo ezithembekileyo kwaye ezinokwazi ukuhamba, ezinika ukuhamba ngokukhawuleza, ezinokuthi zenzeke, zifune "i-Bike ehambayo!" izimvo ezivela kwipolisi eyayisetyenziselwa ukuthutha i-traffic malunga ne-fender bender. Izibuko zokugqibela ezibhaliweyo zazingabonakali ukuzulazanyisa ngesantya ngaphezu kweeyunithi ze-stock, kwaye nangona ndifake izibuko zeSUV enye xa ndicima ngendawo eqinekileyo, ndicinga ukuba ukubukeka kwabo okupholileyo kulungele iprofayili ebanzi.
Mhlawumbi inxalenye engcono yosuku lwam lokuqala kunye neBonneville yayiyipaka kwindawo egalaji kwaye ikhangele kuyo umzuzwana, ndizibuza indlela kwaye iya kuthatha phi indiza kwinqanaba lonyaka ozayo. Uluhambo ndilindele ngokuqinisekileyo.
Ama-miles adlulisele eli xesha: 83
Iyonke iikhilomitha eziphakamileyo: 83
AmaGallon adliwe: n / a
Iimitha ezili-odometer eziliwaka: 3,553
Isikhokelo sokuSungulwa koBugcisa bemoto
I-DUMONT - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Indlela Yokufunda Iilwimi zeeFrasal
I-Turtle Turtle Evolution yajika njani
IWartburg College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Salir - kumhlaba
Indlela i-USDA eneNgcaciso yokuThatyathwa
UFrank Lloyd Wright eNew Hampshire
I-Iowa Caucus Winners